Forum Malagasy :: fihaonana katolika malagasy 12 oct evry
Forum Malagasy Index du Forum FORUM - REGIONS Ambatondrazaka fihaonana katolika malagasy 12 oct evry
Sujet du message: fihaonana katolika malagasy 12 oct evry
Tonga indray ny fotoana itaomana antsika Malagasy sy Zanatany ary Izay rehetra tia fihavanana, mba hiarahantsika ivavaka amin'ny amin'ny alahady 12 octobre izao – 11H00. Ao aorianan'ny izany dia hiara- miasakafo ataondro sy hikorana mandritry ny tola-kandro isika . Izany dia natao mba hanamafy ny firaisatsika ao amin'ny Tompo ary indrindra hanamafy ny fifandraisana amin'ny maha-Malagasy. Ny fotoam-pivavahana dia atao amin'ny teny Malagasy. Samia ihany koa mitondra sakafo ataonadro izay zaka. Izany no ho zaraina iraisantsika latabatra.
Apandreneso ny havana sy namana rehetra.